दालचिनी एक : फाइदा अनेक, के के छन् फाइदा ? | NepalDut
दालचिनी एक : फाइदा अनेक, के के छन् फाइदा ?
दालचिनी र तेजपातको स्वाद सुवासिलो र मीठो हुन्छ । यसलाई अधिकतम् मसलाको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । दालचिनी हाम्रो भान्छामा सजिलै पाइने मसला हो । यसलाई प्रायः चियामा राखेर खाने गरिन्छ । यसमा फाइबर, क्याल्सियम तथा आइरनको मात्रा बढी हुने गर्दछ ।
यसले विभिन्न परिकार स्वादिलो बनाउने मात्रै होइन, विभिन्न रोगबाट बचाउने तथा उपचारको काम पनि छन् । आयुर्वेदिक, यूनानी र चाइनीज मेडिसिन बनाउन दालचिनीको प्रयोग हजारौँ वर्षदेखि भैइरहेको पाइन्छ । आज पनि यसलाई कैयौँ रोगको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ ।
-ब्लड सुगर लेभल नियमित गर्न सहयोग मिल्छ । यसले गर्दा डाइबिटिजका लागि यो प्राकृतिक उपचारका रुपमा लिने गरिएको छ ।
-एलडिएल अर्थात ब्याड कोलेस्ट्रोललाई कम गर्छ, पेस्ट बनाई खाएमा धमनीमा कोलेस्ट्रोल जम्मा हुन पाउँदैन । यसबाट हृदयघातको जोखिम कम हुन्छ ।
-अपच, ग्याष्ट्रिक तथा वान्ता हुने जस्ता समस्याका लागि पनि दालचिनी उपयुक्त हुन्छ । यस्तो समस्या भएका व्यक्तिले हरेक दिन १ गिलास पानीसँग आधा चम्चा दालचिनी पाउडर खाएमा राम्रो हुन्छ । पेटमा हुने इन्फेक्सनका लागि पनि दालचिनीको प्रयोग राम्रो मानिएको छ ।
-जोर्नीहरूमा लगाउँदा जोर्नी दुख्ने समस्या कम हुने गर्छ ।
-क्यान्सरको उपचार तथा क्यान्सर हुनबाट रोक्का लागि पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसमा क्यान्सर सेलको विकास तथा विस्तारलाई रोक्ने क्षमता हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
-शरीरमा रक्त सञ्चार नियमित हुने गर्छ । यसले गर्दा मेटबोलिजम रेट बढ्छ, जसले मोटोपन कम गर्न सहयोग मिल्छ ।
-दालचिनीलाई विश्वका ७ उत्कृष्ट एन्टिअक्सिडेन्ट मध्ये लिने गरिएको छ । यसको प्रयोगले शरीरमा रहेका मृत कोष हट्ने र छालाको सुन्दरता राम्रो हुन्छ ।
-यस्तै यसमा हुने एन्टिब्याक्टेलिय गुणले दाँत तथा गिँजालाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ । दाँत मसाज गरेमा दाँत तथा गिँजा सम्बन्धी समस्या कम हुन्छ ।
-चिसो लागेको वा रुघाखोकी लागेको अवस्थामा १ चम्चा दालचिनी पाउडरलाई १ गिलास पानीमा उमालेर पिउँदा फाइदा हुन्छ ।
-दमका रोगीहरूका लागि दालचिनीको प्रयोग फाइदाजनक छ भने मस्तिष्कका लागि पनि दालचिनी उपयोगी हुने देखिएको छ । यसको प्रयोगले स्मरण शक्ति बलियो हुने अध्ययनहरूबाट देखिएका छन् ।
रुघाखोकीको ज्वरोमा : १ टुक्रा दालचिनी १ चिम्टी सुठोको धूलो ५ वटा ल्वाङ, आधा चम्चा जिरा हालेर बेसरी उमालेर दिनमा तीन पटक काँडा बनाएर पिउने गरेमा ठिक हुन्छ ।
दम खोकीमा : आधा चम्चा दालचिनीको धूलो, १ चिम्टी मरिचको धूलो, आधा चम्चा जेठीमधुको धुलो, ४ वटा कण्ठकारीको फल, २ चम्चा मिश्री १ माना पानीमा पकाउने र १ चौथाई भएपछि छानेर शिशीमा राख्ने र दिनको ३ पटक विहान, दिउँसो, वेलुका खाने गरेमा ठिक हुन्छ ।
चिसोले कपाल दुखेमा : दालचिनी र मरिचको लेप बनाएर विहान, वेलुका निधार र कन्चटमा लगाउने गरेमा चिसोले कपाल दुखेको ठिक हुन्छ ।
घाँटी बसेमा : सूठो, बाबरी, दालचिनीको काडा बनाएर तातै पिएमा २÷४ पटक मै ठीक भएर आउँछ ।
कोलस्टेरोल घटाउन : दालचिनीले कोलस्टेरोल घटाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउछ । बिहान दालचिनी तातो पानीमा उमालेर खाँदा एकदम फाईदा पुर्याउछ ।
खोकीसंग जोडिएको सम्बन्ध कस्तो ?
उमालेको दालचिनी पानीलाई कपडाले छान्ने र दिनमा २ पटक त्यो पानी पिउने ।
१ चम्चा दालचिनीको धुलोलाई १ कप पानीमा मिसाउने र राम्रोसँग उमाल्ने ।
दालचिनीलाई महसँग मिसाएर खाँदा यी रोगसंग लड्न सहायता पुग्छ ।
मोटोपन : १ गिलास पानीमा एउटा सानो चम्चा दालचिनी र मह उमालेर दिनदिनै पिउँदा कोलेस्ट्रोल २ गुणा घट्छ । दिनदिनै यसको चिया खाँदा तौल कम गर्न सहायता पुग्छ ।
जोर्नी र घुँडामा पीडा : १ महिनासम्म २ चोटी तातोपानीमा दालचिनी र मह हालेर पीडा भएको ठाउँमा मालिस गर्दा पीडा गायव हुन्छ ।
कस्ता मानिसले दालचिनी खानुहुँदैन ?
१. पेटको समस्या : खाने कुरामा अधिक मात्रामा दालचिनीको प्रयोग गर्नु पेटका लागि हानिकारक हुन्छ । यसले पेटमा जलन र ग्याँस पैदा गर्छ । यसबाहेक जो मानिसलाई अल्सर छ उनीहरूले पनि दालचिनी खानुहुँदैन ।
२. गर्भवती महिला : गर्भवती महिलाले दालचिनीको प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसको प्रयोगले महिलाको पेटमा एसिडिटी र पिडा हुनेगर्छ । यसबाहेक दालचिनी खानाले समयभन्दा पहिला नै डेलिभरी हुने खतरा रहन्छन् ।
३. लिभर समस्या : लिभरको समस्या भएका व्यक्तिले दालचिनीको प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसको प्रयोगले लिभर झन् बिग्रन सक्छ ।
४. रगत पातलो बनाउँछ : दालचिनीको अधिक सेवनले रगत पातलो बनाउने गर्छ । यस्तोमा जो मानिसको रगत पहिला नै पातलो छ उनीहरूले दालचिनी खानु हुँदैन ।
५. त्वचामा जलन : केही महिलाहरू दालचिनीको पेष्ट लगाएर अनुहारमा निखार ल्याउने कोशिस गर्छन् । तर, जो महिलाहरूको छाला संवेदनशिल छ उनीहरूले यसको प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसका कारण रेशेज र चिलाउने समस्या उत्पन्न हुन्छ ।